Shiinaha Mini timo burush leh daahan caag midabo leh, UV koronto, warshad gudbinta biyaha iyo soo saarayaasha | Yongsheng
Burushka timaha shaqada
Burushka timaha caadiga ah
Burushka timaha jajaban
Burushka timaha barkinta barkinta
Wareeg xirfadeed qalajinta burushka timaha
Nooc cusub oo caan ah burush timo
Burushka timaha yar
Burush timo alwaax iyo bamboo
Burushka timaha alwaax
Burushka timaha bamboo
Burush timaha daahan Rubber leh daabacaadda midabo leh ...
UV koronto, ku-beddelaha biyaha, shinning daabacaadda timaha b ...
Dahaarka caag, UV koronto, daabacaadda shinning, biyaha ...
Dahaarka caag ah, kala iibsiga biyaha, UV suufka korontada h ...
Burush timo wareegsan oo xirfad leh oo leh heerkul sare
Burush timaha Mini la daahan caag midabo, UV ele ...
Dahaarka caagga midabka burush timaha caadiga ah naqshad ...
Burushka timaha yar oo leh caag midab leh, UV koronto, wareejinta biyaha
Waxyaabaha: ABS ， Rubber y Nylon, Bristles
Midabka: Midab UV midab leh, Dahaarka Rubber, Cirbadda… Customization.
MOQ: 2400PCS / Qaabka
S140X-9, S140X-7, S140X-3, S140X-2
T42X-6T, T42X-7T, T42X-5T, T42X-19T
T66X-6T, T66X-7T, T66X-5T, T66X-19T
T90X-6, T90X-7, T90X-5, T90X-2
T119X-6T, T119X-7T, T119X-19T, T119X-2T
T140X-6T, T140X-17T, T140X-3T, T140X-2T
UV144X-6, UV144X-7, UV144X-17, UV144X-5
Wax soo saarka ka hor ------ muunad ------ xaqiijinta-Waxyaabaha ------ iibsiga-Qeybta ------ qayb ------ Cirbadeyn-Tayo ------ kormeerka-Qeybta ------ qayb ------ dusha ------ dhammeystirka-Tayada ------ kormeerka-Golaha-Tayada ------ kormeerka-Xirmooyinka.
Suuqyada Waaweyn ee Dhoofinta
Aasiya, Mareykanka, Mid Bariga / Afrika, Yurub, Australia, Hindiya.
Waqtiga Hogaaminta: 45-60days.
Xirmo Caadi ah: Burush kasta oo wata boorsada nayloon ee furan. 24PCS / sanduuqa hoose.240PCS / kartoonka.
Habka lacag bixinta: 30% T / T deebaaji hore, dheelitirka lacag bixinta ee ka dhanka ah nuqulka B / L ka dib shixnad.
Cabbir yar oo la qaadan karo - Petite ayaa loo qiyaasay keydinta habboon, aad ugu fiican nolol maalmeedkaaga mashquulsan. Ku hayso boorsadaada wixii taabasho ah markaad socoto. Burushka timaha yaryar wuxuu si fiican uga shaqeeyaa timaha qoyan ama qalalan wuxuuna ku habboon yahay ragga, haweenka iyo carruurta. Burushyada waxaan ka dhigeynaa kuwo yar, jarjar oo kufiican nolosha gogosha. Petite ayaa loo qiyaasay keydinta habboon, oo si fudud ugu jirta boorsadaada, carruurtuna sidoo kale way jecel yihiin .Buraashkani wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa timaha qoyan ama qalalan. Ku habboon dumarka ， ragga iyo carruurta, timo dheer ama gaaban, timo dhuuban ama qaro weyn.
Nadiifinta Timaha yar ee timaha ayaa leh waxyaabo gaar ah, Dareemka adag ayaa si tartiib ah u duugaya madaxa inta uu kicinayo socodka dhiigga iyo xoojinta timahaaga
Waxyaabaha loo yaqaan 'Squirt Detanglers' waxaa loogu talagalay si qurux badan si loo yareeyo xanuunka loona ilaaliyo timaha dhinacyada kala jaban iyo burburka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku cadaydo xoog yar sidaa darteed waxaad ku dhaafi kartaa waxyeelo yar oo timahaaga ah.
Sidoo kale waxaan leenahay dhowr nooc oo qaabab kala duwan ah oo madaxa ah oo gacantana waa la dooran karaa. Ku xaji xajin jilicsan waxay noqon kartaa mid aad u fudud in la maareeyo. Madax kala duwan ayaa loo isticmaali karaa muuqaalo badan iyo wixii saameyn ah ee aad rabto.
Isku laabidda iyo qaab dhismeedka is haysta ee si fudud u qaadista. Cabirka yaryari wuxuu ku habboon yahay jeebka, boorsada, bacda xajin. Ku habboon safarka, taariikhda, dukaameysiga, dibedda.
Hore: Nooc cusub oo caan ah burush timo
Xiga: Burush timo wareegsan oo xirfadlayaal ah oo leh caabbinta heerkulka sare ee qaabab kala duwan
Burushyada timaha la tuuro
Burush timo alwaax
Burush timo alwaax shaqsiyeed
Burushka Timaha Alwaaxda Square
Burushka Timaha ee Alwaax
No.436 Xihe Village Jiulonghu Town Degmada Zhenhai Ningbo, Shiinaha 315205